टाउकाको अपरेशन गर्दा लाइन गएपछ ! – Dailny NpNews
टाउकाको अपरेशन गर्दा लाइन गएपछ !
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १९, २०७८ समय: १०:०१:५१
डाक्टरहरुका अनुसार अपरेशन निकै संवेदनशील अवस्थामा थियो । त्यस्तो बेलामा लाइन आउने प्रतिक्षा गर्न सकिने स्थिति थिएन डाक्टरहरुले तत्कालै मोवाइल फोनको टर्च प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । पछि डाक्टरहरुले यसको भिडियो सामाजिक संजालमा जारी गरेका छन् । डाक्टरहरुलाई उद्धृत गर्दै डेलीमेलले लेखेको समाचार अनुसार ३४ वर्षका ती बिरामीको अपरेशन सफल भएको छ ।
स्वास्थ्य अधिकारी अर्तुरो जुनिगाका अनुसार अस्पतालको लाइन जानेबित्तकै जेनेरेटरको अटोमेटिक सिस्टम सुरु हुनुपर्नेमा प्राविधिक कारणवश त्यस्तो नभएपछि यस्तो समस्या आएको थियो जुनिगाले यसमा कहाँ कमजोरी भयो भन्नेबारे जाँच भइरहेको बताएका छन् । जुनिगाका अनुसार अपरेशन सकिएपछि बिरामीका परिवारलाई यसबारे जानकारी दिइएको थियो । यसका अलावा अस्पतालका स्टाफले पनि कठिन समयमा राम्रो काम गरेको उनले बताए ।